Hafainganam-pandeha avo CNC machining 8 - China Ningbo Beilun Daqi Hongxiang
Hafainganam-pandeha avo CNC machining 8
High quality namboarina aluminium die nanarato bobongolo / tooling / maty & anjara
Marika Name: namboarina
Model Number: HX10091die nanarato bobongolo
Famolavolana Mode: maty Casting
Product: Vehicle bobongolo
Mamolavola technics: maty fanariana
Fonosana: vata hazo
bobongolo ara-nofo: DIEVAR, SKD61, H13,8407, sns.
Design rindrambaiko: PROE, ug, CAD
Bobongolo base: Standard C45
Bobongolo ny fiainana: 50000shots ny 100000 tifitra
Product Name: avo lenta maty aluminium fanariana bobongolo
fanamarinana: ISO9001: 2008
Ambony fitsaboana: Heat fitsaboana
Ataovy maty aluminium tsirairay fanariana lasitra ao anaty vata hazo
toy ny fifanarahana
faritra Model HX10091
koronosy technics Die nanarato
ary ny maro hafa aluminium firaka rehetra azo ekena.
lafiny Araka ny sary na ny santionany
surface fitsaboana Sandblasting, Painting, Powder coating, Anodize,
nandrisika, Chrome voapetaka, Nickel voapetaka, sns.
Die nanarato Lasitra lavaka Mpitovo na Multiple
45 # vy, sns.
Heat fitsaboana Mafy fo, Nitriding
hamafin'ny HRC50 ~ 55
hamolavola endri-javatra Advanced famolavolana, Novel rafitra, High marina tsara,
Quality fitaovana, Long androm-piainany, ny fotoana fanaterana Short
fitaovana CNC fametrahana mazava tsara bobongolo sokitra milina, CNC namorona milina,
CNC fiovana, EDM, Linear fanapahana milina, Die spotting milina (200T),
Die nanarato teny milina (180T ~ 1250T), Lathe, milina mitoto vary;
CMM, Material detector, hamafin fitaovana fitiliana, spectrograph, sns.
Software CAD, ug, Pro / E, JSCAST-v8 an'i Japana, FLOW3D.v9.2 of America, sns
Quality taratasy fanamarinana UKAS & SGS ISO9001: 2008
tombony Quality Mikiry manao tsara foana ny tsipiriany rehetra
Price Angamba tsy ny ambany indrindra, fa tsy maintsy ho ara-dalàna sy ny
Delivery Na oviana na oviana taty aoriana noho ny fanaterana ny fotoana ao amin'ny fifanarahana
Service 1. Na aiza na aiza ary na oviana na oviana ianao mandefa fanontaniana, foana
mahazo mamaly fa tsy mihoatra ny 2 andro fiasana.
2. Oviana no fahoriana nandritra ny tetikasa fanodinana, foana
hahita sy hamaha izany olana aloha amin'ny mpanjifa,
dia fantaro izay lainga ny andraikitra, ny antoko
na ny lafiny mpanjifa.
R & D Be dia be traikefa sy mahay teknika eo amin'ny fanariana faty
Team United sy ny ekipa tsara
Nony nahita mino, Tonga soa eto amin'ny hamangy ny orinasa, dia hino ianareo fa ny vokatra sy ny asa fanompoana dia fifaninanana!
Raha mila tsipiriany, handray mba hifandray antsika. Ningbo HONGXIANG bobongolo fitaovana CO., Ltd te-hamita tetikasa fanariana faty ny sasany aminareo miara-tsara.
Warranty sy Ankehitriny-fivarotana Services herintaona fiantohana fe-potoana ho an'ny milina rehetra afa-tsy ny lafin-javatra fantsona sy ny olombelona sns, 18 volana manomboka amin'ny vaninandro rehefa nahazo milina, na 12 volana, rehefa vita ny fametrahana;
Mpanolo-tsaina tolotra ho an'ny milina manontolo ny fiainana, ny fanohanana ara-teknika ny 24 ora amin'ny alalan'ny mailaka;
Antsoy antsika 86-0577-65905955 86-13356198899 miasa mandritra ny fotoana;
UPS-friendly anglisy Soft-fantany, mpampiasa boky fampianarana ary handefa expericed teknisianina for installaton & debuggin
1. Afaka ny milina hihaona tsara ny zavatra ilaina?
Izahay no hanome anareo ny soso-kevitra araka ny requirments manokana. Milina rehetra dia namboarina mba hahazoana izay ilainao tsara.
2. ve ianao orinasa orinasa na ny varotra?
Isika no orinasa, dia manao tsipika izany nandritra ny taona maro.
3. Ahoana ny fomba fandoavam-bola?
T / T noho ny banky mivantana, na amin'ny alalan'ny fanomezan-toky ara-barotra Alibaba fanompoana, na West Union, na amin'ny vola.
4. Inona no hanampy antsika ho azo antoka momba ny milina tsara rehefa manao loha laharana ny baiko?
Alohan'ny delivery, dia handefa anareo ny sary sy horonan-tsary ho anao ny mijery ny toetra, ary koa afaka mandamina ny kalitao mijery amin'ny tenanao na ny fifandraisana ao amin'ny antoko fahatelo fisafoana fikambanana.
5. matahotra izahay dia tsy mandefa antsika ny milina rehefa handefa anareo izahay ny vola?
Mariho tsara ny mihoatra noho ny raharaham-barotra sy ny fanamarinana fahazoan-dalana. Ary raha tsy matoky isika, dia afaka mampiasa ny fanomezan-toky ara-barotra Alibaba service na fandoavam-bola amin'ny alalan'ny LC, miantoka ny vola.
6. Nahoana isika no tokony hifidy ny orinasa?
Professtional isika amin'ny fonosana milina nandritra ny taona maro, ary tsara kokoa isika rehefa manome-varotra
fanompoana. Miantoka ianao tsy mety ho an'ny fifanarahana.
7.Need more antsipirihany milina na horonan-tsary?
Mba andefaso olona Mr.Jim mivantana!
Isika koa dia afaka ampanjifaina ny milina araka ny antsipirihany tinady, toy ny fonosana
hafainganam-pandeha, kitapo ny halavany, Max vokatra avo, sns manantena ny hiara-miasa aminareo tsy ho ela!
Warranty sy Ankehitriny-fivarotana Services herintaona fiantohana fe-potoana ho an'ny milina rehetra afa-tsy ny lafin-javatra fantsona sy ny olombelona sns, 18 volana manomboka amin'ny vaninandro rehefa nahazo milina, na 12 volana, rehefa vita ny fametrahana; Mpanolo-tsaina tolotra ho an'ny milina manontolo ny fiainana, ny fanohanana ara-teknika ny 24 ora amin'ny alalan'ny mailaka; Antsoy antsika 86-0577-65905955 86-13356198899 miasa mandritra ny fotoana; UPS-friendly anglisy Soft-fantany, mpampiasa boky fampianarana ary handefa expericed teknisianina for installaton & debuggin 1. Afaka ny milina hihaona tsara ny zavatra ilaina? Izahay no hanome anareo ny soso-kevitra araka ny requirments manokana. Milina rehetra dia namboarina mba hahazoana izay ilainao tsara. 2. ve ianao orinasa orinasa na ny varotra? Isika no orinasa, dia manao tsipika izany nandritra ny taona maro. 3. Ahoana ny fomba fandoavam-bola? T / T noho ny banky mivantana, na amin'ny alalan'ny fanomezan-toky ara-barotra Alibaba fanompoana, na West Union, na amin'ny vola. 4. Inona no hanampy antsika ho azo antoka momba ny milina tsara rehefa manao loha laharana ny baiko? Alohan'ny delivery, dia handefa anareo ny sary sy horonan-tsary ho anao ny mijery ny toetra, ary koa afaka mandamina ny kalitao mijery amin'ny tenanao na ny fifandraisana ao amin'ny antoko fahatelo fisafoana fikambanana. 5. matahotra izahay dia tsy mandefa antsika ny milina rehefa handefa anareo izahay ny vola? Mariho tsara ny mihoatra noho ny raharaham-barotra sy ny fanamarinana fahazoan-dalana. Ary raha tsy matoky isika, dia afaka mampiasa ny fanomezan-toky ara-barotra Alibaba service na fandoavam-bola amin'ny alalan'ny LC, miantoka ny vola. 6. Nahoana isika no tokony hifidy ny orinasa? Professtional isika na famonosana milina nandritra ny taona maro, ary manome varotra tsara kokoa rehefa avy-fanompoana. Miantoka ianao tsy mety ho an'ny fifanarahana. 7.Need more antsipirihany milina na horonan-tsary? Mba andefaso olona Mr.Jim mivantana! Isika koa dia afaka ampanjifaina ny milina araka ny antsipirihany tinady, toy ny fonosana hafainganam-pandeha, kitapo ny halavany, Max vokatra avo, sns manantena ny hiara-miasa aminareo tsy ho ela!
Previous: Hafainganam-pandeha avo CNC machining 7
Next: Hafainganam-pandeha avo CNC machining 9
Die Mandatsaka bobongolo
Raikitra lafiny lehibe ho an'ny herinaratra môtô singa
Hafainganam-pandeha avo CNC machining 10
Japana Honda bracket 3
Hafainganam-pandeha avo CNC machining 13
Engine menaka mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any bracket for DFM Mini autos 2 ....
Lafiny raikitra ny raharaha sisa SUZUKL crank